"VKontakte" - सबै भन्दा प्रसिद्ध र सहज रूसी भाषा बोल्ने सामाजिक सञ्जाल को एक। यसको लोकप्रियता मात्र होइन सामाजिक कार्यहरु खोजी र मनपर्ने अडियो र भिडियो रेकर्डिङको को सूची सिर्जना गर्ने क्षमता सुनिश्चित, तर पनि छ। आफ्नो मनपर्ने ट्रयाक सजिलो छ, तर कसरी "कुलपति" मा गीतहरू मेटाउन को प्रश्न पनि अनुभवी प्रयोगकर्ता मा उत्पन्न गर्न सक्छ थप्नुहोस्।
को "आयोग" मा रेकर्डिङको आफ्नो सूचीबाट गीतहरू हटाउन
हटाउन सजिलो तरिका - "मेरो रेकर्ड" बाट। यो जानुहोस् र तपाईंले पहिले थपियो (धेरै शीर्ष नवीनतम वाहेक) गर्न नयाँ, तपाईंको सबै अडियो सूची देख्नुहुनेछ।
सम्पादन र रेकर्ड मेटाउन मौका छ गर्न, यसलाई माउस कर्सर सार्न र प्रतीक देखा देख्नुहुनेछ।
कसरी "सम्पर्कमा" गीत हटाउन? यो धेरै सरल छ: एक क्रस र बायाँ क्लिक गर्न कर्सर सार्न। नाम खैरो हुनेछ, र क्रूसमा को स्थान त्यहाँ पहिले देखि नै एक प्लस साइन प्रक्रिया को वाहेक देखि परिचित छ - यो तपाईं गल्ती गरेर हटाइयो र फर्कन चाहनुहुन्छ भने, गीत पुनर्स्थापना लागि प्रेस आवश्यक छ।
तपाईं बिन्दु देख्नुभएन भने के "मेरो रेकर्ड"
कसरी "आयोग" मा गीतहरू मेटाउन तपाईं पार देख्न सक्नुहुन्छ भने? कुनै सम्पादन क्षमताहरु भने, सबै को सबै भन्दा, तपाईं "संगीत" भन्दा "मेरो रेकर्ड" मा आएका छन्।
सामान्यतया, "मेरो रेकर्ड" वेबसाइटको बाँया मेनुमा प्रदर्शित हुनुपर्छ।
तपाईं त्यहाँ पाउँछौं भने, तपाईं सेटिङ परिवर्तन गर्न अनिवार्य छ। "मेरो सेटिङहरू" (तल, एउटै मेनुमा फेला) नेभिगेट र "मेरो रेकर्ड" वस्तु नजिकै एक निशान राखे।
यो मेनु पछि वस्तु उपलब्ध हुन्छ। अर्को, खण्ड जाने र माथि वर्णन प्रक्रिया प्रयोग हटाउन।
कसरी पर्खाल बाट गीत "स्पर्श" मेटाउन
कहिलेकाहीं गीतहरू पर्खाल थपिएका छन् (टेप हेर्दै गर्दा सामान्यतया वस्तु "शेयर" को प्रयोग गरेर, तर स्वयं थप गर्न सकिन्छ)।
कसरी पर्खाल बन्द "सम्पर्कमा" गीतहरूको मेटाउन? "मेरो रेकर्डिङको" निष्कासन यस्तै कुरा मा प्रक्रिया: सार्नुहोस् माउस कर्सर रेकर्ड मा र हामी एक पेन्सिल प्रतिमा र एक क्रस देख्नेछन्। पेन्सिल - सम्पादन, क्रस - हटाउने।
को "पुनर्स्थापित" पर्खाल मा रेकर्डिङ फर्कन लिङ्क गर्नेछ प्रदर्शन गर्नेछ क्रूसमा क्लिक गर्नुहोस्, र रेकर्ड गीत संग गायब हुनेछ, "सन्देश हटाइयो। पुनर्स्थापना"।
सबै गीतहरू कसरी मेटाउन
कसरी एक ठूलो रकम जम्मा गरेको छ भने, र प्रक्रिया घण्टा मा तान्न खतरनाक, को "कुलपति" मा गीतहरू मेटाउन? यस को लागि, हामी थप कार्यक्रम स्थापना गर्न आवश्यक छ।
चेतावनी! ट्रोजन घोडाहरू र भाइरस: अक्सर कार्यक्षमता "कुलपति" विस्तार गर्न मालवेयर प्राप्त उपयोगी सफ्टवेयर लुकाएको! होसियार हुनुहोस् र सधैं आफ्नो एन्टिभाइरस सक्षम राख्नुहोस्।
सबैभन्दा आज कार्यात्मक प्लग VkOpt छ, क्रोम, फायरफक्स, ओपेरा र अरूलाई सहित सबैभन्दा लोकप्रिय ब्राउजर, समर्थन गर्दछ।
VkOpt प्लगइन को मद्दतले "सम्पर्क" मा गीतहरू कसरी मेटाउन?
कार्यक्रम को आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस्।
डाउनलोड पृष्ठमा जानुहोस् र आफ्नो ब्राउजर प्रकार चयन गर्नुहोस् "स्थापना" बटन क्लिक गरेर।
अनुरोध गरिएको संकल्प संग सहमत हुनुहुन्छ।
आफ्नो ब्राउजर (यसलाई बन्द र फेरि सुरु) पुनः सुरु गर्नुहोस्।
प्लगइन प्रयोग गर्न सरल छ: "मेरो रेकर्ड" आफ्नो खाता "आयोग" गर्ने अधिकार मेनु वस्तु "सबै मेटाउनुहोस्" मा जानुहोस्। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र एक समय प्रतीक्षा गर्नुहोस्। सबै रेकर्डिङको मेटिनेछ।
तपाईं आफ्नो खाता सुरक्षा बारे गम्भीर चिन्तित हुनुहुन्छ र तेस्रो-पक्ष प्लग-इन्स विश्वास छैन भने, तपाईं निम्न बीमा गर्न सक्नुहुन्छ:
अन्य कुनै पनि तपाईंको खाता, "VKontakte" को लागि पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्।
प्लगइन स्थापना गर्नुहोस्।
सबै रेकर्ड मेटाउन।
पूर्व पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्।
तसर्थ, प्लग-कतै आफ्नो पासवर्ड पठाउने भने पनि, यो अवैध हुनेछ।
अब तपाईं कसरी "कुलपति" मा गीतहरू मेटाउन थाहा छ। शुभकामना छ!
"शेवरलेट क्रुज" कहाँ जम्मा गर्न? कार "शेवरलेट क्रुज"
Sociometry: परिणाम कसरी प्रशोधन गर्न। Sociometry: डाटा प्रोसेसिंग र परिणाम व्याख्या
को फूलगुच्छा देखि एक गुलाब कसरी उखेल्ने गर्न? केही सुझावहरू
बोर्ड वा बोर्ड: संस्करण सही छ जो?
विदेश यात्रा लागि बीमा नीति
रोसा एमिलीन गिलिट: विवरण र फोटो
जनावर बारेमा छोटो कथा - ज्ञान को पहिलो स्रोत
रातो सबैभन्दा सुन्दर रंग
बच्चालाई एक दाँत कटौती गर्दा के गर्न